သက်ဝေ: Home Sweet Home
Posted by သက်ဝေ at 10:40 PM
ချစ်ကြည်အေး April 8, 2010 at 11:00 PM
အကြံကုန် သက်ဝေ ဒါ့ပုံရိုက် ပါ...ဟ ဟ ...:)
ပန်းခရမ်းပြာ April 8, 2010 at 11:04 PM
Block နံပါတ်နဲ့ လမ်းနာမည်များ ပါမလားလိ်ု့
PhyoPhyo April 8, 2010 at 11:28 PM
ဟုမ်းဆွိပုံးပေါ့ :) ခင်မင်တဲ့
ဇွန်မိုးစက် April 8, 2010 at 11:31 PM
Home Sweet Home ဆိုလို့ အပြေးလေးလာကြည့်တာ...
2 storey apartment ထင်တယ်နော်...ဟုတ်လား?
khin oo may April 8, 2010 at 11:48 PM
ကြည် April 9, 2010 at 12:31 AM
H--- :) April 9, 2010 at 5:03 AM
Hmoo April 9, 2010 at 5:25 AM
Anonymous April 9, 2010 at 6:02 AM
စလုံး က တိုက်ပုံကတော်တော်မြင့်တော့
ရွှေရတုမှတ်တမ်း April 9, 2010 at 6:33 AM
ဟိုအကောင် ဆိုတာ ဟို Co. က
ဟိုဟာ ဆိုတာ အရက် ချက်ရောင်းတယ်ထင်နေတာ
စုချစ် April 9, 2010 at 8:06 AM
သက်ဝေ April 9, 2010 at 9:22 AM
ချစ်ကြည်... ဟုတ်ပါ့... ဟုတ်ပါ့...း))
မချို... ဒီတခါတော့ ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်တော့...း))
ဇွန်... အဲဒါမျိုး ဟုတ်ဖူးလေ...
မမ... ဟဲဟဲ... သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ...
ကြည်... ခုန်ချရင် သေသေချာချာ ကိစ္စပြတ်နိုင်တဲ့ အထပ်မှာပါ... (၆ ထပ်နဲ့ အထက်ကို ဆိုလိုပါသည်)
H... & Hmoo... တယောက်ထဲ လို့ထင်လို့ အတူတူ ပေါင်းရေးလိုက်တယ်... ဟဲဟဲ... ဟိုဟာကော ဟိုအကောင်ကော အောက်မှာ ပြန်ရှင်းထားတယ်လေ...း))
စာဖတ်သူ... ဒီ့ထက်မြင့်တဲ့ တိုက်တွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်... မျှော်တော့ မနေပါနဲ့... ခုန်ချချင် လာခဲ့ပါ... Welcome... :P
ကိုကြီး ကျောက်နော်... ဒါပဲ စဉ်းစားနေ... ဟွန်း... တော်တော်ဆိုး...း))
စုချစ်လေး... ပျောက်လှချည်လား ညီမရဲ့... ဘီးဇီးနေတာလား... သတိရနေတယ်...း))
rose of sharon April 9, 2010 at 10:14 AM
building ကအသစ်လေးဘဲ... နေတတ်ရင်ကျေနပ်စရာပါနော်... Home seet home ဆိုထဲက ဘာလိုသေးလို့လဲ.... ပုံးဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ် ဟုတ်ဖူးလား :)
Vista April 9, 2010 at 12:48 PM
လေးထောင့်ပုံးကို ဘယ်လောက်ပေးဝယ်ရတယ် ဆိုတာ စလုံးကလူတိုင်းသိပါတယ်နော ...အဲပိုက်ပိုက်နဲ့ ဆို အမေရိကန်မှာလုံးချင်းအိမ်နဲ့ ကားတစ်စီးမကရတယ် ဟင့်
Clementi က block 355 သို့ မဟုတ် 354 , 356 တိုက်သုံးတိုက် ထဲက တစ်တိုက်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်၊
PAUK April 9, 2010 at 7:11 PM
သင်းနွယ်ဇင် April 9, 2010 at 9:16 PM
အိမ်ကိုအနိမ့်ဆုံးထပ်ကိုတောင်မြင်ရအောင်ရိုက်နိုင်တာ ဘယ်လိုရိုက်လဲဟင် အိပ်ပြီးရိုက်တာလား??
ကလူသစ် April 9, 2010 at 9:31 PM
တော်တော်မြင့်ပါလား။ အပေါ်ထပ်မှာမနေနဲ့နော်။ မီးပျက်ရင် ရေဒွတ်ခရောက်နေမယ်။ လှေခါးက ကုန်းရုန်းတက်နေရမယ်။
ညီမလေး April 10, 2010 at 7:17 AM
အဲ့ဟာကြီးကို ရိုက်တဲ့ ဟိုဒါကြီးကို လိုချင်တယ်းD
အဲ့ဟာ = Home Sweet Home ပုံကြီး
ဟိုဒါ = ကင်မရာ
Anonymous April 10, 2010 at 11:53 AM
ကလီမန်တီ က လာရမှာဝေးလို့အန်တီပဲ လုပ်လိုက်တော့..ဟီး
တန်ခူး April 11, 2010 at 7:26 AM
ချစ်တဲ့သက်ဝေ… အဲဒီလေးထောင့်ပုံတိုက်ကြီးထဲက ကဗျာဆန်ထဲအိမ်ကလေးထဲက ချစ်စရာမိသားစုလေးကို လွမ်းတယ်… အိုးမဲမသုတ်ဖူးဆိုရင် ရေလာပက်ချင်တယ်… ဖြစ်မလား… မုန့် လုံးရေပေါ်တော့ ကျွေးရမှာနော်… ငရုတ်သီးမထည့်ကြေး…
Moe Cho Thinn April 11, 2010 at 1:06 PM
မမက ဟိုအကောင် ဆိုတော့ တနင်္ဂနွေသမီးလား။ (တအားတွေးသွားသည်)
Anonymous April 11, 2010 at 3:05 PM
mae April 13, 2010 at 10:26 PM
clementi နဲ့ တူတယ်နော် မမသက်ဝေ